Parn On The Brain (၂၀၁၀) Marnia Robinson - မင်းရဲ့ Brain On Brain
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှယောက်ျားသူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်ပြောဆိုသည်ငါ့က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ဖိုရမ်အတွက်ရောက်ရှိလာသောစတင်ခဲ့သည်။ Google ကသူတို့ကို-ဖြစ်ကောင်းလှေတျတျောမူခဲ့သောငါ၏အ site ကိုဦးနှောက်အပေါ်လိင်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်မျှဝေလို့ပဲ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ site သို့သော်ဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘဲပြန်လည်နာလန်ထူအကြောင်းပါ။ သို့သျောလညျးသူတို့ကိုကြိုဆိုငါ့ကိုလှုံ့ဆော်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်သူတို့ရဲ့သိသာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှု။ ငါစကားကိုနားထောငျအဖြစ်ဤဧည့်သည်နောက်ကွယ်မှ porn စွန့်ခွာရန်အရုန်းကန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားထောကျပံ့ပေး။
မကြာခဏသူတို့သတင်းပို့ porn အသုံးပြုမှုဒေသတွေအဖြစ်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကို: ပိုပြီးစွမ်းအင်, လူမှုရေးယုံကြည်မှု, ပိုကောင်းတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု, လေ့ကျင့်ခန်းထဲကနေ သာ. ကြီးမြတ်အကျိုးအမြတ်, ပိုမိုအားကောင်းစိုက်ထူ, အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့သိမ်မွေ့အပျော်အပါးကနေအစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ, တိုးမြှင့အကောင်းမြင်နှင့်ထို့ထက် ပို. ခံစားဖို့ပြန်လာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်, များစွာသောလူတို့သညျအငျတာနကျညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲပျော်ရွှင်ကြသည်။
သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံ porn ရဲ့အကြီးအကဲအန္တရာယ်အရှိဆုံးအသုံးပြုသူများသိသာမဟုတ်ကြောင်းငါ့အားပြခဲ့သည်။ ဒါဟာဦးနှောက်-တစ်အသစ်များကို neocortex (ဆင်ခြင်တုံတရားဦးနှောက်) အရတည်ရှိသည်ဖြစ်သောရှေးခေတ် "နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်," ၏အဘို့ကို၏အကျိုးကို circuitry ၏ပြင်းထန်သောဆွကနေပေါ်ပေါက်။ အကျိုးကို circuitry စိတ်ခံစားမှု, မိတ်လိုက်, စား, လှုံ့ဆျောမှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, စှဲအုပ်ချုပ်။ ဒါဟာ dopamine လို့ခေါ်တဲ့ neurochemical, သည် "ကိုယ်ရောစိတ်ပါရ!" neurotransmitter များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။
အသစ်အဆန်း-On-demand (slot ကစက်တွေ, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, porn ဗီဒီယိုများ) မကြာခဏဦးနှောက်ကဒီစရိုက်တွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဘို့, ကြောင်းမလှူမယ့်အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်အောင်ဖြားယောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်အသစ်အဆန်း-On-demand အဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းအဘို့မသာတက်ပွင့်လင်းပြောင်းလဲ ၏မျိုးဗီဇလူ့အဖွဲ့အစည်းတခု တစ်ဝတ္ထုမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်.
ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးချင်းစီ mouse ကိုကလစ်မှာသုက်အဘို့တောင်းစားသစ်ကိုမိတ်ဖက်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, ဦးနှောက်ကိုအလွယ်တကူထိုအရိပ်မိအခွင့်အလမ်းများအပေါ် ပို. ပို. အာရုံစိုကျဖို့သူ့ဟာသူ rewires ကြောင်းသကဲ့သို့ကြိုးက register လုပ်သွား။ ဤသည်အလျင်အမြန်အသုံးပြုသူရဲ့ဦးစားပေးပြန်စီနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry လိင်နှင့်အစားအစာဆီသို့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်အဓိကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့လိင်စိတ်နိုးထနှင့် junk အစားအစာ superstimulating ဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်ပုံရသည်။ junk အစားအစာအဝလွန်အမေရိကန်များ၏ 64 ရာခိုင်နှုန်းကိုအောင် (နှင့်အဝလွန်သူတွေရဲ့တစ်ဝက်) ကူညီပေးခဲ့တယ်။
ယခုမှာအခမဲ့ streaming များကိုအခမဲ့ရယူပြီးအခမဲ့ရုပ်သံလွှင့်ထုတ်နိုင်ပါပြီ။ (အရိပ်အမြွက် - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Montreal ပါမောက္ခတစ် ဦး သည် porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းသူ၏လေ့လာမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ သူသည်တက္ကသိုလ်တစ်ခု၏အဓိကကျောင်းဝင်းတွင်“ အပျိုစင်အပျိုများ” ကိုမတွေ့ရပါ။ )
"အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းနေတဲ့ဥပစာမဟုတ်ဘူး" ဟုစိတ်ရောဂါ-Norman Doidge အတွက်ကရှင်းပြသည် အဆိုပါ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်ကို။ porn user name ဦးနှောက်မြေပုံ၏ပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှု, rapt အာရုံစူးစိုက်မှု, အားဖြည့်ခြင်း, အသစ်သောအာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏ dopamine စုစည်းပြီးများအတွက်လိုအပ်သောအပေါငျးတို့သအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသောညစ်ညမ်းလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများသို့လှည့နေကြသည်။
အမှန်စင်စစ် porn ရဲ့ dopamine မီးရှူးမီးပန်းများတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလိင်ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုသောမူးယစ်ဆေးကဲ့သို့အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးအတွက် Playboy အင်တာဗျူး, ဂီတပညာရှင်ယောဟနျသ Mayer လိင်ဆက်ဆံထက်သူမဟုတ်ဘဲပုံရိပ်တွေမှချွတ်လူရှုပ်ချင်ပါတယ်ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူကရှင်းပြသည်,
Porn သုံးစွဲသူ၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်သည်နောက်တစ်ခုအားကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်တန်ဖိုးရှိသည်ဟုမယူမှတ်တော့ပါ။ အမှန်မှာ ဦး နှောက်၏ဤအပိုင်းသည်ဆင်ခြင်။ မရနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာများကိုအလေးချိန်ပေးပြီး၎င်းသည် dopamine အများဆုံးထုတ်လွှတ်သောအရာဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ်ဦးကသူကိုပိုမိုပြင်းထန်သောဆွချင်ဆုံးဖွယ်ရှိရဲ့ပြင်းထန်သောဆွကနေပြန်လည်နေစဉ်ဝိရောဓိကြောင့်ပါပဲ။ ဤသည်စရိုက်ယန္တရားတစ်ခုခုအထူးသဖြင့်လှုံ့ဆော်ဖို့ ( "တန်ဖိုးရှိသော") ဝန်းကျင်အခါလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ (dopamine ၏သက်ရောက်မှုအားနည်းသဖြင့်) အချိန်များအတွက်အပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှု numbing အားဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပိုအဘို့အလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပါ။
မူးယစ်ဆေးစွဲတူညီတဲ့သက်ရောက်မှုရရှိရန် ပို. ပို. လိုအပ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလမျးဖွငျ့ဖြစ်ပါသည်။ ဤစက်ကိရိယာဖြစ်နိုင်လက်ခံ, ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်ရှားပါးခဲ့ကြသည့်အခါမျိုးဗီဇပြန့်ပွားဘို့ပဲဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မျိုးဗီဇအပေါ်ရှောက်သွားမယ့်အဓိကအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ယနေ့တွင်သို့သော်ဦးနှောက်အမှားတွေတစ်ခုချင်းစီကိုဖြားယောင်း 2-D ကိုစတားမင်းသမီးက။ မိမိအတာဝန်ပြုသောအမှုဘယ်တော့မှလျှင်အဖြစ်တစ်ဦးက porn အသုံးပြုသူခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Overstimulated ယောက်ျားထိုကဲ့သို့သောအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များ၏ Charm အဖြစ်, အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့သိမ်မွေ့အပျော်အပါးမှထုံကြီးထွားလာသတင်းပို့ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့နိုင်ပါတယ် hypersensitive သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်အတူပေါင်းသင်း "ကယ်ဆယ်ရေး။ " အများအပြားသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့, ပိုမိုလှုံ့ဆော်ပစ္စည်းများ၏လိုက်စားသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတချို့ key ကိုပစ္စည်းပျောက်ဆုံး-နှင့်နေသည်ထိုသို့လျှင်အဖြစ်ခံစားချက်များ၏ဒုက္ခမှသက်သာရာရစေရန်မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည်။ ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုယာယီခံစားဘို့မိမိတို့စွမ်းရည်မှိန်ပါပြီ။
ဒီသံသရာထဲမှာဖမ်းမိယောက်ျားစိုးရိမ်ခံစားရရန်အဘို့, ပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူးလူမှုရေးအရနေမကောင်း-မှာ-လွယ်ကူခြင်း, သုန်မှုန်, ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်သောနှင့်ငွ။ သူတို့ဦးနှောက် reboot တိုင်အောင်, ဘဝအနတ္တ, ဒါပေမယ့်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Single-စိတ်လိုက်စားဘို့ပုံရသည်။ တယောက်သောသူကထားအဖြစ်:
မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူ, porn အသုံးပြုမှုကိုအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ်ကြီးနဲ့ကျွန်မအခြေခံအားဖြင့်ကထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်။ '' အထူး '' တကယ့်ကြောင်းမဟုတ်ခဲ့စေ။ ငါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏မှေးမှိန်လာကမ္ဘာကြီးထဲသို့ဝင်သောအခါမူကား, ငါ့ဦးနှောက်ကပဲများ ပို. ပို. လိုချင်တစ်ခုခုရှာတွေ့ခဲ့သည် ... ။ ကျွန်မထက်နည်း6လအတွင်းထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ mags နှစ်ပေါင်းများစွာ: အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ။ အွန်လိုင်း porn ၏လအနည်းငယ်: စှဲ။
သူတို့ဦးနှောက် equilibrium ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသည်အထိမကြာခဏအသုံးပြုသူများကသူတို့ဖွင့်ဖြတ်သန်းနေသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ အခြို့သောအဘို့, ဒီအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောရှည်ဆုတ်ခွာသူတို့ပိတ်မိခံစားမိကြောင်း (လှုပ်, အိပ်မပျော်, စိတ်ပျက်အားငယ်, မတရားသော, ပိုင်းခြားခေါင်းကိုက်) ဒါရောကျသောနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, မဟာအင်တာနက်က Porn-OFF အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်များ 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲမသွားနိုင်ဘူး။ မအချို့အရာရှိများကနိုင် Securities and Exchange Commission, လို့ထင်ရသည်။
ကွန်ပျူတာစာတတ်မြောက်ယောက်ျား compulsive porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအန္တရာယ် run ရှိရာတစ်ဦးကကမ္ဘာဂြိုဟ်ကဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပို. ပို. ဆွဘို့အလိုဆန္ဒ၏ဖြေလျှော့ဖို့ရုန်းကန်နေရပြည်သူ့ယေဘုယျအားဖြင့်အနည်းငယ်သာအချိန်, sensitivity ကို, ဒါမှမဟုတ်တီထွင်ဖန်တီးမှုများအတွက်ဖြေရှင်းရန်, ကောင်းသောအကြောင်းတရားများဆက်ဆံရေး, ဒါမှမဟုတ်သဘာဝရဲ့အပျော်အပါးရှိသည်။ သို့သျောလညျးညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲပိုကောင်းခံစားရတဲ့သူတွေကိုအတွက်အသွင်ပြောင်းဖှယျဖြစ်ပါတယ်။ ဤအပို့စ်များကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ:
တဖန်ငါခံစားရတယ်။ တဖန်ငါစိတ်ခံစားမှုခံစားရတယ်။ အမြိုးသမီးမြား၌ငါ၏အကျိုးစီးပွားကြီးထွားနေပါတယ်, ငါ၏ယုံကြည်ကိုးစားတက်သည်နှင့်နောက်တဖန်ငါ့လှုံ့ဆျောမှုပေးသည်။ ယခုတွင်ငါသည် 28 ရယ်နှင့်နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲသည်အထိကျွန်မဟောင်းတစ်ဦး 15 ယခုနှစ်ရင့်ကျက်ခဲ့သလိုခံစားရတယ်။ ငါအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနှင့်ဤမလှူမှထမြောက်အဖြစ်ဒါပေမယ့်ငါမတိုင်မီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့မှမပါဘူးစိတ်ခံစားမှုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုချီကြီးထွားကူညီပေးခဲ့တယ်။
ရက်အနည်းငယ်နောက်မှငါတိုးမြှင့်စွမ်းအင်, တိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုနှင့်ပိုမိုမြင့်မား Self-တန်ဖိုးထားသတိပြုမိသည်။ အဲဒါကိုရဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီး ယူ. ပြီးနောက်ပေမယ့်တစ်လ-အဲဒီမှာ-သူတို့အားတိုးတက်မှုခေါင်မိုးအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောခဲ့ကြသည်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒါဟာထှနျးအင်္ကျီသို့မဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့စီးဆင်းနေသော, တောက်ပဆံပင်နှင့်အမွှေးအကြိုင်များကဲ့သို့နည်းနည်းအမှုအရာအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းရကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အတူငြိမ်ဝပ်ပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ကြင်နာမှုနှင့်လူစွမ်းကောင်းယုံကြည်မှုနှင့်တကွ, မျက်စိအတွင်းကလူကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ငါအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်မနေ့ကငါ့ထံသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ငါ့လက်ကိုလှုပ်ခါနှင့် IT ကိုင်ထားပါ။ ဝိုး။ ငါလူတိုင်းကိုပြောနေတာဒီတော့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ငါအဘို့အရည်မှန်းခဲ့သည်ထက်တစ်ပင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းဦးတည်သှားသောဇာတ်ညွှန်းနှစ်ခုစာမကျြနှာရေးသားခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းခေါင်မိုးအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ငါသိပ်ပိုပြီးစွမ်းအင်များငါလျော့နည်းသုန်မှုန်ရယ်ငါအလုပျအတှကျပိုပွီးစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုရှိသည်, တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအချိန်ညှစ်မခံစားရဘူး, ငါငါ့ကိုလှည့်ပတ်အရာအားလုံးနှင့် ဆက်စပ်. တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းအသိခံစားရသည်။ သို့သော်ထိုသို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကိုငါ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ရည်းစားနဲ့ကျွန်မပြီးသားအချင်းချင်းအများကြီးပိုနီးစပ်ခံစားရတယ်။
ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများ sexually မှကြွလာသောအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်, ညစ်ညမ်းမှု၏ဒီဂရီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုများနှင့်တတိယပါတီများမှဖို့အန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရလေ့ရှိတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်ဦးနှောက် hijack မှ porn ၏တနျခိုးမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူသင့်ပါတယ်။
Marnia (2010 အတွက် YBOP ၏ဖန်တီးမှုအပါအဝင်) 2011 အတွက်အထက်ပါဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည်ကတည်းကတစ်ဦးကအများကြီးကြုံခဲ့ရသိရသည်။ ဆောင်းပါးထဲမှာထွက်ထားအခိုင်အမာများအတွက်ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုအနည်းငယ်ဥပမာ: